Sida Loo Codsado Medicaid gudaha Missouri -
Bogga ugu weyn Sida Loo Codsado Medicaid gudaha Missouri
isha sawirka: google.com
Waxaad codsan kartaa maalgelinta Medicaid, oo xisaabisa shan-meelood meel kharashaadka daryeelka caafimaadka ee Missouri, waa isha ugu weyn ee taageerada isbitaallada iyo dhakhaatiirta, guryaha kalkaalinta, iyo shaqooyinka daryeelka caafimaadka.
Dammaanad-dhammaadka furan ee lacagaha u dhigma ee federaalku waxay siinaysaa dawlad-goboleedyada dabacsanaanta ay u isticmaalaan Medicaid si ay wax uga qabtaan mudnaanta daryeelka caafimaadka sida cudurka faafa ee opioid.
Qaab dhismeedka maalgelinta ayaa sidoo kale awood u siinaya dawladaha inay u isticmaalaan Medicaid sidii shabakad badbaado ah marka dhaqaalahu isbeddelo iyo arrimo kale ay sababaan in caymisku kordho.
Medicaid waa il joogto ah oo dood ah sababtoo ah waxay door weyn ka ciyaartaa labadaba miisaaniyada federaalka iyo gobolka waana isha aasaasiga ah ee caymiska dadka Maraykanka ee dakhligoodu hooseeyo. Waa kuwan qaar ka mid ah shuruudaha laga digtoonaado marka ay timaado Medicaid iyo sida looga codsado Medicaid gudaha Missouri.
Medicaid waa barnaamij gargaar oo ay dawladdu maalgeliso. Waxay u adeegtaa dadka dakhligoodu hooseeyo ee da' kasta leh. Inta badan, bukaanku kama masuula wax kasta oo ka mid ah kharashyada la xidhiidha kharashyada caafimaadka ee la daboolay.
Marmar, wax yar ayaa loo baahan yahay wada-bixin. Waa hindise federaal iyo dawlad-goboleed wadajir ah. Way ka duwan tahay gobol ilaa kan xiga. Waxa maamula dawlad goboleedyada iyo dawladaha hoose ee hoos yimaada habraaca federaalka.
Eeg link this haddii aad u qalanto Medicaid (ama Caymiska Caafimaadka Carruurta) ee gobolkaaga.
Marka dambe qoraalkan, waxaad ku baran doontaa sida looga codsado Medicaid gudaha Missouri.
Medicare waa qorshe caymis daryeel caafimaad. Biilasha daawaynta waxa lagu bixiyaa khasnadaha kalsoonida ee kuwa la daboolay ay wax ku darsadeen. Waxay ugu horrayn u adeegtaa dadka ka weyn da'da 65, iyada oo aan loo eegin dakhligooda, iyo sidoo kale dadka curyaanka ah ee da'da yar iyo bukaannada sifaynta.
Bukaan-socodka ayaa bixinaya qayb ka mid ah isbitaallada iyo kharashyada kale iyada oo loo marayo lacagaha laga jarayo. Daboolista aan cisbitaalka ahayn waxay u baahan tahay kaliya qaddar yar oo bishii ah. Medicare waa barnaamij ay dowladdu maalgeliso.
Waxaa maamula Xarumaha Adeegyada Medicare & Medicaid, oo ah wakaalad federaal ah, oo asal ahaan waa isku mid dalka Mareykanka oo dhan.
Akhri: Dib -u -eegista Faa'iidooyinka Humana Medicare 2021: Qorshayaasha ugu Fiican | Sida ay u shaqayso | Sharci Ama Fadeexad
Yaa xaq u leh Medicaid?
Kahor intaadan helin sida looga codsado Medicaid gudaha Missouri waa inaad xaqiijisaa inaad xaq u leedahay. Medicaid waxa laga yaabaa inay ku siiso daryeel bilaash ah ama qiimo jaban iyadoo ku xidhan dakhligaaga iyo tirada qoyskaaga.
Medicaid waxay dabooshaa qaar ka mid ah dadka dakhligoodu hooseeyo, qoysaska iyo carruurta, haweenka uurka leh, dadka da'da ah, iyo dadka naafada ah ee dhammaan gobollada.
Gobolada qaar, barnaamijku wuxuu diyaar u yahay dhammaan dadka waaweyn ee dakhligoodu hooseeyo ee qaata wax ka yar lacag go'an.
10 shay oo aad ka ogaan karto Medicaid
Kahor inta aynaan bilaabin sida looga codsado Medicaid gudaha Missouri, marka hore baro faahfaahinta muhiimka ah ee medicaid.
1. Medicaid waa barnaamijka caymiska caafimaadka dadweynaha ee dadka dakhligoodu yar yahay.
Medicaid waa barnaamij daryeel caafimaad oo ay dawladu maamusho oo loogu talagalay dadka dakhligoodu yar yahay ee Maraykanka.
Mid ka mid ah shantii qof ee Maraykan ah ayaa daboola Medicaid, oo ay ku jiraan dad badan oo leh baahiyo daryeel caafimaad oo adag oo qaali ah. Barnaamijku waa isha aasaasiga ah ee caymiska daryeelka muddada-dheer ee Maraykanka.
Inta badan dadka qaata Medicaid ma haystaan ​​doorashooyin kale oo caymis caafimaad oo la awoodi karo. Medicaid waxay dabooshaa adeegyo caafimaad oo kala duwan waxayna ka ilaalisaa kharashaadka jeebka ilaa ugu yaraan.
Medicaid waxay ku xisaabtantaa ku dhawaad ​​shan meelood meel dhammaan kharashaadka daryeelka caafimaadka shakhsi ahaaneed ee Maraykanka, maalgelinta isbitaallada, xarumaha caafimaadka bulshada, takhaatiirta, guryaha dadka lagu xanaaneeyo, iyo shaqooyinka daryeelka caafimaadka la xiriira.
Ciwaanka XIX ee Sharciga Lambarka Bulshada iyo sharciyo badan oo federaal ah ayaa maamula barnaamijka, iyaga oo qeexaya shuruudaha Medicaid ee federaalka iyo ikhtiyaarrada gobolka iyo maamulada.
Xarumaha Medicare iyo Adeegyada Medicaid (CMS) ee ka tirsan Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha (HHS) ayaa mas'uul ka ah hirgelinta Medicaid.
2. Medicaid waxaa loo qaabeeyey sidii shuraako federaal iyo gobol ah.
Dawlad-goboleedyadu waxay maamulaan barnaamijyada Medicaid iyadoo la raacayo tilmaamaha dawladda dhexe waxayna leeyihiin go'aan ku saabsan cidda la daboolay, adeegyada la daboolay, sida daryeelka caafimaadka loo bixiyo, iyo sida dhakhaatiirta iyo isbitaallada loo bixiyo.
Goboladu waxa kale oo ay heli karaan ka dhaafitaanka Qaybta 1115 si ay u tijaabiyaan una hirgeliyaan habab aanu u baahnayn sharciga federaalku laakiin in Xoghayaha HHS uu go'aamiyo inay lagama maarmaan tahay si loo gaadho yoolalka barnaamijka.
Dabacsanaantan awgeed, barnaamijyada Medicaid ee gobolka ayaa aad u kala duwan.
Xaq u lahaanshaha Medicaid waxa ay ku salaysan tahay laba dammaanad: marka hore, dhammaan dadka Maraykanka ah ee buuxiya shuruudaha u-qalmitaanka Medicaid waa la dammaanad qaaday caymis, iyo marka labaad, goboladu waxa loo dammaanad qaaday dollar u dhigma oo federaal ah iyada oo aan lahayn koofi adeegyada u qalma ee la siiyo isqorayaasha xaqa u leh.
Sicirka u dhigma ee inta badan is-diiwaangeliyayaasha Medicaid waxaa lagu go'aamiyaa qaacido sharciga ah kaas oo bixiya ciyaarta u dhiganta ugu yaraan 50% oo bixisa heerka ciyaarta federaalka sare ee gobolada saboolka ah.
3. Caymiska Medicaid waa horumaray.
U-qalmitaanka Medicaid ee waalidiinta, carruurta, dadka faqiirka ah, indhoolayaasha, iyo dadka naafada ah waxay ku xidhnayd kaalmada lacagta caddaanka ah (Aid to Families with Dependent Children (AFDC) ama Dakhliga Dheeraadka ee Amniga Federaalka (SSI) laga bilaabo 1972) sida hoos timaada Medicaid asalka ah 1965 sharciga.
Dawladuhu waxay dooran karaan inay bixiyaan caymis heerar dakhli oo ka sarreeya kuwa u qalma kaalmada lacagta caddaanka ah.
Koongarasku wuxuu si tartiib tartiib ah u kordhiyey shuruudaha ugu yar ee federaaliga ah wuxuuna siiyay gobollada ikhtiyaarro caymis oo cusub, gaar ahaan carruurta, haweenka uurka leh, iyo dadka naafada ah.
Koongarasku waxa kale oo uu amray in Medicaid ay ka caawiso ka-faa'iideystayaasha Medicare ee dakhligoodu yar yahay khidmadaha iyo qaybsiga kharashka, iyo sidoo kale u oggolaanshaha dawlad-goboleedyada inay bixiyaan ikhtiyaarka "iibsashada" Medicaid ee dadka naafada ah ee shaqeeya.
Sannadkii 1996dii, xidhiidhka ka dhexeeya u-qalmitaanka Medicaid iyo daryeelka waa la gooyay, 1997-kii, Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP) ayaa la aasaasay si uu u daboosho carruurta dakhligoodu yar yahay ee ka sarreeya goynta Medicaid iyadoo la xoojiyey heerka ciyaaraha federaalka.
Dawladuhu waxay sameeyeen olole wacyigelin ah iyo habraacyo isdiiwaangelineed oo la fududeeyey si ay carruurta xaqa ugu leh ugu qoraan Medicaid iyo CHIP markii ugu horreysay ka dib isbeddelladan siyaasadda.
Kordhinta caymiska Medicaid ee carruurta ayaa calaamadeeyay bilowga dib-u-habaynta dambe ee dib-u-habaynta Medicaid ku samaysay barnaamij caynsanaan caafimaad ku salaysan.
Sannadkii 2010, iyada oo qayb ka ah hindise caynsanaan caafimaad oo ballaadhan, Xeerka Daryeelka La awoodi karo (ACA) waxa uu Medicaid u balaadhiyey dadka waaweyn ee aan qaan-gaarin ee dakhligoodu gaadhayo 138% FPL ($17,236 qofba sannadka 2019) iyada oo la xoojiyey maalgelinta u dhiganta ee dawladda dhexe.
ACA ka hor, shakhsiyaadku waa inay si gaar ah ugu qalmaan oo ay buuxiyaan heerarka dakhliga si ay ugu qalmaan Medicaid taasoo ka tagaysa inta badan dadka qaangaarka ah ee dakhligoodu yar yahay iyada oo aan haysan ikhtiyaaro caymis ah maadaama u-qalmitaanka dakhliga ee waalidiinta uu aad uga hooseeyo heerka saboolnimada federaalka ee gobolada badankooda, iyo sharciga federaalku wuxuu reebay dadka waaweyn oo aan ku tiirsanayn. caruurta barnaamijka si kasta oo ay u liitaan.
Isbedelka ACA si wax ku ool ah ayaa meesha looga saaray u-qalmitaanka qaybaha waxaana loo oggolaaday dadka waaweyn ee aan carruurta ku tiirsanayn in la daboolo; si kastaba ha ahaatee, natiijada go'aanka Maxkamadda Sare ee 2012 awgeed, ballaarinta ACA Medicaid ayaa si wax ku ool ah ikhtiyaar u ah gobollada.
Marka loo eego ACA, dhammaan gobolada waxaa looga baahnaa inay casriyeeyaan oo ay hagaajiyaan u-qalmitaanka Medicaid iyo hababka diiwaangelinta.
Balaadhinta Medicaid waxay keentay hoos u dhac taariikhi ah oo ku yimid saamiga carruurta aan lahayn caymis, iyo, gobollada qaatay ballaarinta ACA Medicaid, hoos u dhac weyn oo ku yimid saamiga dadka waaweyn ee aan lahayn caymis.
Dad badan oo qaangaar ah oo Medicaid ah ayaa shaqeeya, laakiin in yar ayaa heli kara caymiska loo-shaqeeyaha, iyo ka hor ACA ma lahayn ikhtiyaarro caymis la awoodi karo.
4. Medicaid waxay dabooshaa 1 qof 5tii Mareykan ah waxayna u adeegtaa dadyow kala duwan
Medicaid waxay u adeegtaa sidii barkad khatarta sare leh ee suuqa caymiska gaarka ah, oo bixisa caafimaad iyo daryeel wakhti dheer malaayiin Maraykan ah oo ugu saboolsan iyo muwaadiniinta ugu nugul.
Waxay dabooshay in ka badan 75 milyan oo Maraykan ah oo dakhligoodu yar yahay sanad xisaabeedka 2017. Laga bilaabo Febraayo 2019, 37 gobol ayaa soo saaray sharciga ballaarinta Medicaid. Marka loo eego xogta FY 2017 (marka dawlado yar ay qaateen ballaarinta), 12.6 milyan oo qof ayaa lagu daray kooxda ballaarinta. Carruurtu waxay ka badan yihiin afar ka mid ah tobankiiba (43%) ee dhammaan is-diiwaangeliyeyaasha Medicaid, halka dadka da'da ah iyo dadka naafada ah ay ka kooban yihiin mid ka mid ah afartii is-diiwaangeliyay.
Medicaid waxay si gaar ah door muhiim ah uga ciyaartaa dadyow gaar ah oo daboolaya: ku dhawaad ​​kala bar dhammaan dhallaanka gobolka; 83% carruurta saboolka ah; 48% carruurta qabta baahiyo daryeel caafimaad oo gaar ah iyo 45% dadka waaweyn ee aan qaangaarka ahayn ee naafada ah (sida naafada jirka, itaal darrida korriinka sida autism, dhaawaca maskaxda, jirro maskaxeed oo halis ah, iyo cudurka Alzheimers); iyo in ka badan lix ka mid ah tobankii qof ee deggan guryaha waayeelka.
Dawladuhu waxay dooran karaan inay siiyaan Medicaid carruurta naafada ah ee qoysaska dakhligoodu sarreeyo si ay u buuxiyaan daldaloolada caymiska caafimaadka gaarka ah oo ay xaddidaan culayska maaliyadeed ee ka baxsan jeebka.
Sidoo kale, Medicaid waxay caawisaa ku dhawaad ​​1 ka mid ah 5tii ka faa'iidaystayaasha Medicare khidmadaha Medicare iyo wadaagga kharashka waxayna siisaa qaar badan oo iyaga ka mid ah faa'iidooyinka aanay daboolin Medicare, gaar ahaan daryeelka muddada-dheer.
Akhri: W2 vs W4: Maxay ku kala duwan yihiin?
5. Medicaid waxay dabooshaa tiro balaadhan oo ah adeegyo caafimaad iyo daryeel daryeel waqti dheer ah
Medicaid waxay dabooshaa adeegyo kala duwan si ay u daboosho baahiyaha kala duwan ee dadka ay caawiso. Gobolo badan ayaa doorta inay daboosho adeegyada ikhtiyaariga ah sida dawooyinka la qoro, daawaynta jireed, muraayadaha indhaha, iyo daryeelka ilkaha marka lagu daro adeegyada federaalku waajibiyay.
Tobanka "faa'iidooyinka caafimaadka aasaasiga ah ee ACA," oo ay ku jiraan adeegyada ka hortagga iyo ballaarinta caafimaadka dhimirka iyo adeegyada daaweynta isticmaalka mukhaadaraadka, ayaa lagu daray caymiska dadka waaweyn ee ballaarinta Medicaid.
Medicaid waxay door muhiim ah ka ciyaartaa la dagaalanka cudurka faafa ee opioid iyo isku xidhka ka faa'iidaystayaasha Medicaid adeegyada caafimaadka habdhaqanka guud ahaan.
Medicaid waxay siisaa faa'iidooyin dhammaystiran carruurta, oo loo yaqaanno Adeegyada Baadhista Wakhtiga Hore ee Baadhista iyo Daawaynta (EPSDT).
EPSDT ayaa si gaar ah muhiim ugu ah carruurta naafada ah sababtoo ah caymiska gaarka ah ayaa inta badan ku filan inuu daboolo baahidooda.
Si ka duwan caymiska caafimaadka ganacsiga iyo Medicare, Medicaid waxa kale oo ay dabooshaa daryeelka muddada-dheer oo ay ku jiraan daryeelka guriga kalkaalinta iyo guryo badan iyo adeegyo iyo taageerooyinka muddada dheer ku salaysan beesha.
In ka badan kala badh dhammaan kharashyada Medicaid ee daryeelka muddada-dheer ayaa hadda loogu talagalay adeegyada lagu bixiyo guriga ama bulshada ee u sahlaysa waayeelka iyo dadka naafada ah inay si madaxbannaan ugu noolaadaan halkii ay ku noolaan lahaayeen machadyada.
Marka la eego in dadka is-diiwaangeliyay Medicaid iyo CHIP ay leeyihiin awood xaddidan oo ay ku bixinayaan kharashaadka jeebka ka soo gala dakhligooda yar awgeed, sharciyada federaalku waxay ka mamnuucayaan dawladaha inay ku dallacaan ceymiska Medicaid ka-faa'iideystayaasha dakhligoodu ka yar yahay 150% FPL, waxay mamnuucaan ama xaddidaan qaybsiga kharashka qaar ka mid ah dadweynaha iyo adeegyada, oo xaddid wadarta kharashyada jeebka ka baxsan oo aan ka badnayn 5% dakhliga qoyska.
Gobolada qaar ayaa helay cafis si ay ugu dalacaan khidmadaha sare iyo qaybsiga kharashka ka badan inta lagu ogol yahay xeerarka federaalka.
Qaar badan oo ka mid ah cafisyadan ayaa bartilmaameedsada ballaarinta dadka waaweyn laakiin qaarkood ayaa sidoo kale khuseeya kooxaha kale ee u qalma iyada oo loo marayo dariiqooyinka u-qalmitaanka dhaqameed.
6. Isqorayaasha Medicaid badankood waxay daryeelka ku helaan qorsheyaasha daryeelka maareysan ee la maareeyey
In ka badan saddex-meelood laba ka-faa'iideystayaasha Medicaid waxay ku qoran yihiin qorshooyinka daryeelka la maareeyo ee gaarka ah ee qandaraas kula jira dawladaha si ay u bixiyaan adeegyo dhammaystiran, kuwa kalena waxay ku helaan daryeelkooda nidaamka ujrada-adeegga.
Qorshayaasha daryeelka la maareeyay ayaa mas'uul ka ah hubinta helitaanka adeegyada Medicaid iyada oo loo marayo shabakadaha bixiyayaasha waxayna halis maaliyadeed ugu jiraan kharashkooda.
Waagii hore, dawladuhu waxay xaddideen daryeelka la maareeyay carruurta iyo qoysaska, laakiin waxay sii kordhayaan daryeelka la maareeyay ee shakhsiyaadka leh baahiyo adag.
Ku dhawaad ​​kala badh gobolada ayaa hadda daboola adeegyada muddada-dheer iyo taageerada iyada oo loo marayo qabanqaabada daryeelka la maareeyey ee khatarta ku salaysan.
Inta badan gobolada waxay ku hawlan yihiin nidaamyo kala duwan oo bixinta iyo dib u habaynta lacag bixinta si loo xakameeyo kharashaadka loona wanaajiyo tayada oo ay ku jiraan hirgelinta guryaha bukaan-socodka, is dhexgalka wanaagsan ee daryeelka caafimaadka jireed iyo dabeecadeed, iyo horumarinta hababka "iibsiga ku salaysan qiimaha" ee xira Medicaid Lacag-bixinta bixiyaha ee natiijooyinka caafimaadka iyo cabbirrada waxqabadka kale.
Xarumaha caafimaadka bulshadu waa isha ugu muhiimsan ee daryeelka aasaasiga ah, iyo cosbitaalada badbaadada-net, oo ay ku jiraan cosbitaalada dadweynaha iyo xarumaha caafimaadka tacliinta, waxay bixiyaan daryeel bukaan-jiif oo badan oo loogu talagalay isqorayaasha Medicaid.
Medicaid waxay dabooshaa adeegyada muddada-dheer iyo taageerooyinka u dhexeeya guriga iyo adeegyada bulshada ku salaysan (HCBS) ee u oggolaanaya dadka inay si madaxbannaan ugu noolaadaan guryahooda ama goobaha kale ee beesha ilaa daryeelka hay'adaha ee lagu bixiyo xarumaha kalkaalinta (NFs) iyo xarumaha daryeelka dhexe. loogu talagalay shakhsiyaadka qaba naafo garaadka (ICF-IDs).
FY 2016, HCBS waxay ka dhigan tahay 57 boqolkiiba wadarta kharashyada Medicaid ee LTSS halka hay'adaha LTSS ay ka dhigan yihiin 43 boqolkiiba.
Tani waa isbeddel weyn oo laga soo bilaabo 1995 (labaatan sano ka hor) markii goobaha hay'aduhu ay xisaabiyeen 82 boqolkiiba kharashka Medicaid LTSS ee qaranka.
7. Medicaid waxa ay fududaysaa helitaanka daryeelka
Cilmi-baaris ballaaran ayaa muujinaysa in ka-faa'iideystayaasha Medicaid ay helaan daryeel aad uga wanaagsan kuwa aan caymiska lahayn oo ay u badan tahay inay dib u dhigaan ama tagaan iyagoon daryeel loo baahnayn kharashka awgeed.
Waxaa intaa dheer, heerarka helitaanka daryeelka iyo ku qanacsanaanta daryeelka ee ka dhex jira isqorayaasha Medicaid waxay la mid yihiin qiimayaasha dadka leh caymiska gaarka ah.
Caymiska Medicaid ee haweenka uurka leh iyo carruurta dakhligoodu yar yahay ayaa gacan ka geystay hoos u dhac weyn oo ku yimid dhimashada dhallaanka iyo dhallaanka ee Maraykanka
Hay'ad cilmi-baadhiseed oo sii kordheysa ayaa tilmaamaysa in u-qalmitaanka Medicaid inta lagu jiro carruurnimada ay la xiriirto hoos u dhaca dhimashada dhallinta, horumarka waxbarashada muddada dheer, naafanimada oo yaraatay, iyo heerarka hoose ee isbitaal dhigidda iyo booqashooyinka waaxda xaaladaha degdegga ah ee nolosha dambe.
Faa'iidooyinka sidoo kale waxaa ka mid ah saameynaha maaliyadeed ee nidaamka labaad sida canshuur ururinta oo kordhay sababtoo ah dakhliga sare ee qaangaarka.
Natiijooyinka cilmi-baaristu waxay muujinayaan in ballaarinta Medicaid ee gobolka ee dadka qaangaarka ah ay la xiriirto kororka helitaanka daryeelka, horumarinta caafimaadka is-sheegida, iyo dhimista dhimashada dadka waaweyn.
Nusqaamaha helitaanka bixiyeyaasha qaarkood, gaar ahaan dhakhaatiirta dhimirka, takhaatiirta takhasuska leh, iyo dhakhaatiirta ilkaha, ayaa ah caqabado socda Medicaid iyo inta badan nidaamka caafimaadka oo ay ugu wacan tahay yaraanta bixiyaha, iyo qaybinta juqraafiga ee bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka.
Si kastaba ha ahaatee, heerarka lacag bixinta Medicaid ee hooseeya ayaa muddo dheer lala xiriiriyay ka qaybqaadashada dhakhtarka hoose ee Medicaid, gaar ahaan kuwa takhasuska leh. Qorshayaasha daryeelka la maareeyay, oo hadda u adeega inta badan ka faa'iideystayaasha Medicaid, ayaa ka mas'uul ah qandaraasyada ay la galaan gobollada hubinta shabakado bixiye ku filan.
Ma jiro wax caddaynaya in ka qaybqaadashada dhakhtarka ee Medicaid ay hoos u dhacayso. Sahan la sameeyay 2015, 4 ka mid ah 10kii 2014 bixiyayaasha daryeelka aasaasiga ah ee aqbalay Medicaid ayaa sheegay inay arkeen tiro korodhay oo bukaannada Medicaid tan iyo Jannaayo XNUMX, markii balaadhinta caymiska ACA ay si buuxda u dhaqan gashay.
Medicaid waxay dabooshaa dadka la daalaa dhacaya qabatinka opioid waxayna xoojisaa awooda gobolka si ay u bixiso marin u helka waxqabadyada hore iyo adeegyada daawaynta.
Ballaarinta Medicaid, oo leh maalgelinta federaaliga ah ee la xoojiyey, ayaa siisay dawlad-goboleedyada ilo dheeraad ah si ay u daboosho dad badan oo qaangaar ah oo qaba qabatinka kuwaas oo markii hore laga saaray barnaamijka.
TheMedicaid waxay dabooshaa 4 10 ka mid ah dadka waaweyn ee aan waayeelka ahayn ee qaba qabatinka opioid.
8. Medicaid waxaa si wada jir ah u maal geliya dowladaha iyo dowladda federaalka
Medicaid waxaa si wadajir ah u maalgeliya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. Dawladda federaalku waxay u dhigantaa kharashka Medicaid ee gobolka. Heerka ciyaarta federaalku wuu kala duwan yahay iyadoo lagu salaynayo habka federaalka wuxuuna u dhexeeyaa ugu yaraan 50% ilaa 75% gobolka ugu saboolsan.
Marka loo eego ACA, heerka ciyaarta federaalka ee dadka qaangaarka ah ee dhowaan u qalma ayaa ahaa 100% 2014-2016, isagoo si tartiib tartiib ah hoos ugu dhacay 90% 2020 iyo ka dib (93% 2019).
Qaab dhismeedka federaalku wuxuu bixiyaa agabka loogu talagalay daboolida dadka deggan dakhligoodu yar yahay wuxuuna sidoo kale u oggolaanayaa barnaamijyada Medicaid ee gobolka inay ka jawaabaan isbeddellada tirakoobka iyo dhaqaalaha, beddelka baahiyaha caymiska, hal-abuurka tignoolajiyada, xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada sida dhibaatada qabatinka opioid, iyo masiibooyinka, iyo dhacdooyin kale oo ka baxsan xakamaynta dawladaha.
Helitaanka dammaanad qaadka ah ee lacagaha Medicaid ee federaalku waxay fududaynaysaa cadaadiska miisaaniyadeed ee dawladaha xilliyada hoos u dhaca marka diiwaangelintu kor u kacdo.
Heerarka u dhigma ee federaalku si toos ah ulama qabsanayaan isbeddellada dhaqaale laakiin Koongarasku wuxuu laba jeer kor u qaaday si ku meel gaar ah inta lagu jiro hoos u dhaca si loo xoojiyo taageerada gobollada.
Wadarta guud ee kharashka Medicaid ee dawladda dhexe iyo gobolka wuxuu ahaa $577 bilyan FY 2017. Medicaid waa barnaamijka saddexaad ee ugu weyn gudaha miisaaniyadda federaalka, ka dib Lambarka Bulshada iyo Medicare, oo xisaabiya 9.5% kharashka dawladda dhexe FY 2017.
2017, Medicaid waxa ay ahayd shayga labaad ee ugu wayn miisaaniyada gobolka, kadib waxbarashada dugsiga hoose iyo sare.
Lacagaha Medicaid ee federaalku waa isha ugu weyn ee dakhliga federaalka (55.1%) ee miisaaniyadaha gobolka.
Xisaabinta lacagaha gobolka iyo federaalka, Medicaid ayaa xisaabisa 26.5% wadarta kharashka gobolka. Sababtoo ah Medicaid waxa ay door weyn ka ciyaartaa miisaaniyada gobolka, goboladu waxa ay danaynayaan xakamaynta kharashka iyo daacadnimada barnaamijka.
Is-diiwaangelinta iyo kharashka ayaa si aad ah u kordhay ka dib hirgelinta ACA, laakiin waa la dhexdhexaadiyay sannadihii u dambeeyay.
Iyadoo kobaca kiisaska gaabiska ah ay gacan ka gaysatay yaraynta kobaca kharashka Medicaid ee FYs 2018 iyo 2019, kharashyada badan ee dawooyinka la qoro, adeegyada muddada dheer iyo taageerada iyo adeegyada caafimaadka dabeecadda, iyo go'aamada siyaasadda ee lagu hirgelinayo korodhka heerka bixiyaha la beegsanayo ayaa lagu sheegay arrimo saaraya cadaadis sare Kharashka Medicaid
Hoosta, waxaan ku tusi doonaa sida aad uga codsato Medicaid gudaha Missouri.
9. Kharashka Medicaid waxa uu ku urursan yahay waayeelka iyo dadka naafada ah
Waayeelka iyo dadka naafada ah waxay ka kooban yihiin 1 ka-faa'iideyste 4-tii ka-faa'iideyste, laakiin waxay ku xisaabtamaan ku dhawaad ​​saddex-meeloodlaba laba kharashaadka Medicaid, taasoo ka tarjumaysa kharashaadka sare ee qof kasta oo is-diiwaangeliyay labadaba daryeelka degdegga ah iyo kan muddada-dheerba.
Medicaid waa bixiyaha aasaasiga ah ee hay'adaha iyo bulshada ku salaysan adeegyada iyo taageerada muddada-dheer - maadaama ay jiraan caymis xaddidan oo hoos yimaada Medicare iyo fursado yar oo la awoodi karo ee suuqa caymiska gaarka ah.
In ka badan kala bar kharashka Medicaid waxaa loo aaneynayaa qiimaha ugu sarreeya ee boqolkiiba shanta isqorayaasha. Si kastaba ha ahaatee, marka loo eego qof kasta oo is-diiwaangeliyay, Medicaid waa qiimo jaban marka la barbar dhigo caymiska gaarka ah, taas oo ay ugu wacan tahay heerarka hoose ee Medicaid ee bixiyeyaasha.
Falanqaynta waxay muujinaysaa in haddii dadka waaweyn ee is-diiwaangeliyay Medicaid ay lahaan lahaayeen caynsanaan shaqo ku salaysan, celceliska kharashkooda daryeelka caafimaadku wuxuu ka badnaan lahaa 25%.
Kharashaadka Medicaid qofkii isdiiwaangeliyay ayaa sidoo kale si tartiib tartiib ah u korayay marka loo eego khidmadaha caymiska gaarka ah iyo halbeegyada kharashka caafimaadka kale.
10. Inta badan dadweynuhu waxay qabaan aragtiyo wanaagsan Medicaid.
Codbixinta ra'yiga dadweynaha waxay soo jeedinaysaa in Medicaid ay leedahay taageero ballaaran. Tobankiiba todoba qof oo Maraykan ah ayaa sheegaya inay waligood xidhiidh la lahaayeen Medicaid oo ay ku jiraan saddex ka mid ah tobankii qof ee weligood is-daboolay.
Xataa dhammaan xisbiyada siyaasadda, aqlabiyadda ayaa fikrad wanaagsan ka haysta Medicaid waxayna sheegaan in barnaamijku si fiican u shaqeynayo.
Intaa waxaa dheer, codbixintu waxay muujinaysaa in dad yar oo Maraykan ah ay rabaan hoos u dhaca maalgelinta Medicaid ee federaalka.
Intaa waxaa dheer, taageerada sal-ballaaran, Medicaid waxay haysataa taageero aad u xooggan oo ka mid ah kuwa ay si aan dheellitirnayn ugu adeegto Medicaid oo ay ku jiraan carruurta leh baahiyaha daryeelka caafimaadka gaarka ah, waayeelka, iyo dadka naafada ah.
Akhri: Waa Maxay Qorshaha Faa'idada Medicare Ugu Wanaagsan 2021 | Jawaabaha ugu Fiican?
Sida looga codsado Medicaid gudaha Missouri
Waxaad codsan kartaa caymiska daryeelka caafimaadka Medicaid adiga oo buuxinaya tillaabooyinka soo socda:
Waxaa jira afar siyaabood oo loo codsado
Ka codso marinka khadka tooska ah
Ka codso taleefanka 855-373-9994
Buuxi codsiga kumbiyuutarkaaga
Soo deji oo daabac codsiga
Waa inaad buuxisaa oo aad soo gudbisaa foomka kabka codsigaaga haddii aad:
Da'daadu tahay 65 ama ka weyn
Indhoole yihiin ama naafo yihiin
Hel badbaadada bulshada
Ku noolow xarun caafimaad ama kalkaalin
Hayso Medicare ama VA
U dir codsigaaga warqadda iyo foomamka iimayl, iimayl, ama fakis ah:
Qaybta taageerada qoyska
625 E 13aad St Kansas City, MO 64106
FAQs sida looga codsado Medicaid gudaha Missouri
Medicaid ma dabooshaa adeegyada ambalaansada?
Medicaid waxay dabooshaa adeegyada ambalaaska degdega ah marka ay bixiyaan bixiyayaasha shatiga u leh gobolka. Bukaan-socodka waa in lagu raro baabuur ku habboon oo la baaray oo gobolku fasax ka siiyay.
Waa maxay barnaamijka Medicaid?
Medicaid waa barnaamij gargaar caymis caafimaad oo loogu talagalay carruurta, dadka waaweyn, haweenka uurka leh, dadka naafada ah, iyo waayeelka u qalma dakhligoodu hooseeyo ama shuruudo kale.
Waa maxay farqiga u dhexeeya Medicare iyo Medicaid?
Medicare waa barnaamij caymis caafimaad oo loogu talagalay dadka ka weyn 65 iyo dadka naafada ah iyo bukaannada sifaynta. Medicaid waa barnaamij caawimo ah oo loogu talagalay kharashyada caafimaadka bukaanka dakhligoodu yar yahay.
Medicaid ma dabooshaa daryeelka ilkaha?
Adeegyada ilkuhu waa adeeg looga baahan yahay badi dadka u qalma Medicaid ee da'doodu ka yar tahay 21 jir. Dawladuhu waxay dooran karaan inay bixiyaan adeegyada ilkaha bukaankooda Medicaid ee qaangaarka ah.
Halkeen ka heli karaa dhakhtar aqbala Medicare iyo Medicaid?
Si aad u hesho dhakhtar aqbala lacagaha Medicare iyo Medicaid, waxa laga yaabaa inaad rabto inaad booqato dhakhtarka isbarbardhiga xarumaha Medicare iyo Medicaid. Waxaad ka raadin kartaa Gobolka, Degmo, Magaalada, Zip Code, iyo magaca dhakhtarka iyo magaca Kooxda Dhaqanka.
Malaayiin Maraykan ah, kuwaas oo intooda badan ah qoysas shaqeeya, ayaa ka faa'iideysta caymiska dhammaystiran ee Medicaid iyo ilaalinta maaliyadeed.
Dadka is-diiwaangeliyay Medicaid waxay heli karaan daryeel heerar u dhigma kuwa dadka leh caymiska gaarka ah, inkastoo dakhligoodu yar yahay.
Markaa, haddii aad ku nooshahay Missouri oo aad xaq u leedahay Medicaid, tani waxay ku tusi doontaa sida aad uga codsato Medicaid gudaha Missouri.
Waa Maxay Qorshaha Faa'idada Medicare Ugu Wanaagsan 2021 | Jawaabaha ugu Fiican?
Dib -u -eegista Faa'iidooyinka Humana Medicare 2021: Qorshayaasha ugu Fiican | Sida ay u shaqayso | Sharci Ama Fadeexad
10 Taqasus ee Caruurta ugu Lacagta Badan Caalamka | 2021
Dhakhaatiirta caruurtu waa dhakhaatiir ku takhasusay daryeelka carruurta iyo dhalinyarada. Inkasta oo dhakhaatiir badan oo carruurtu ay yihiin dhakhaatiir guud iyo…